ရုပ်ရှင်ရုပ်သံအသံအယ်ဒီတာများက ၂၀၁၆ ရွှေ Reel အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2016 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများ 2016 ရွှေ Reel လျာထားစာရင်းကြေညာ
Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများ 2016 ရွှေ Reel လျာထားစာရင်းကြေညာ
Los Angeles မြို့ရတာဟာ Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများ (MPSE) ယနေ့ 63 များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းကိုကြေညာrd MPSE ရွှေ Reel ဆုပေးပွဲ။ ဆန်ခါတင်ကမ္ဘာ့အရည်အချင်းအရှိဆုံးသောအသံအနုပညာရှင်နှင့်အတိတ်တစ်နှစ်ရဲ့အများဆုံးထူးချွန် feature ကိုရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြား, ကာတွန်းနှင့်ကွန်ပျူတာဖျော်ဖြေရေးဘဏ်ဍာ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကို၏လုပျငနျးကိုကိုယ်စားပြုသည်။
"ဒီတစ်နှစ်ရဲ့ရွှေ Reel အမည်စာရင်းတင်သွင်းရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြား, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ဂိမ်းနှင့်အခြားနတ်ကတော်လွှမ်းခြုံအလုပ်တစ်ခုထူးချွန်ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်လုပ်ကြပါပြီ," MPSE သမ္မတဖရန့် Morrone ကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအသစ်သောနည်းစနစ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ဇာတ်လမ်းပြောပြတပုဒ်ကိုတစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်သံကို employ မှဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများကိုရှာတွေ့မှမိမိတို့၏စွမ်းရည်နှင့်အတူအထင်ကြီးဖို့ဆက်လက်။ ကျနော်တို့ကသူတို့အောင်မြင်မှုတွေဘို့ဒီနှစ်လျာထားအားလုံးဂုဏ်ပြုပါသည်။ "
အဆိုပါ MPSE ရွှေ Reel ဆုပေးပွဲ feature ကိုရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြား, ကာတွန်း, ကွန်ပျူတာဖျော်ဖြေရေးနှင့်ကျောင်းသားအလုပ်လွှမ်းခြုံ 24 အမျိုးအစားထဲမှာအသံတည်းဖြတ်ရေးအတွက်ထူးချွန်အောင်မြင်မှုအသိအမှတ်ပြုရန်။ အဆိုပါ 63rd MPSE ရွှေ Reel ဆုပေးပွဲအတွက် Westin Bonaventure ဟိုတယ်နှင့် Suites မှာဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2016 ကျင်းပလိမ့်မည် Los Angeles မြို့.
2016 MPSE ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ဆုချီးမြှင့်
2016 MPSE အလုပ်မှာအောင်မြင်မှု Awards
2016 MPSE ရွှေ Reel Award ဆုဆန်ခါတင်
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး: တယ်လီ IN အသံအထူးပြုလုပ်, Foley, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ ADR Animation:
ဆွဲငင်အားရေတံခွန်, ဟဲလ် Olsen, MPSE
ဝက် Shell ကသူရဲကောင်းများ, ဂျက်ဖ် Shiffman, MPSE
Scooby-Doo Lego! Knight ဟာအချိန်အကြမ်းဖက်, Devon Bowman
အံ့ဩခြင်း Avengers, စည်းဝေး မိုက်ကယ် Draghi, MPSE
Penn သုည: အပိုင်းအချိန်သူရဲကောင်း, အဲရစ် Freeman က
Star Wars သူပုန်တွေ, မဿဲ Wood က
ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles, ဂျက်ဖ် Shiffman, MPSE
အဆုံးစွန် Spiderman, မိုက်ကယ် Draghi, MPSE
တယ်လီအတွက်အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး - SHORT ပုံစံ: အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု & ADR
Blindspot, မာကု Relyea
ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ, တိ Kimmel
အမိမြေ, Craig Dellinger, MPSE
အံ့ဩခြင်းရဲ့ Daredevil, Lauren Stephens
အဆိုပါ 100, Norval "ချာလီ" Crutcher III ကို, MPSE
Negroes ၏စာအုပ်, ဒါဝိဒ်သည်နှင်းဆီ, MPSE
ဗိုက်ကင်း - ရာသီ 3, ဂျိန်း Tattersall, MPSE
တယ်လီအတွက်အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး - SHORT ပုံစံ: အသံအထူးပြုလုပ် & Foley
ပိုကောင်းခေါ်ရန်ရှောလု, နစ်ခ် Forshager
တဖက်, နစ်ခ် Forshager
မာကိုပိုလို: တရာမျက်လုံး, Dave ပက်
နောက်ဆုံးသင်္ဘော, မိုက်ကယ်ဂရေဟမ်, MPSE
စစ်မှန်သောစုံထောက်, ကထပ်လောင်းဆောင်းရာသီ, MPSE
Turn: ဝါရှင်တန်၏သူလျှိုများ, ဂျော့ခ်ျ Haddad
ဗိုက်ကင်းရာသီ 3, ဂျိန်း Tattersall, MPSE
တယ်လီအတွက်အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး - SHORT ပုံစံ: Music
အမေရိကန်ထိတ်လန့ Story, ဒါဝိဒ်သည် Klotz
ဘိတ်မိုတယ်, မိုက်ကယ်ရိုင်ယန်, MPSE
ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ, ဒါဝိဒ်သည် Klotz
ကဒ်များ၏အိမ်, Jonathon Stevens
ဂျိန်းအဆိုပါဗာဂျင်း, Darren ရှငျဘုရငျ
အဆိုပါ Jungle အတွက်မိုဇတ်, Jason Newman က
မစ္စတာစက်ရုပ်, ဘင် Zales
အဆိုပါပါးရိုက်, ရောဘတ် Cotnoir, MPSE
အင်ပါယာ, ယောရှုသည် Winget
Galavant, ခရစ္စတိုဖာ Brooks
Nashville, Jaclyn Newman က Dorn
တံစို့ + ကြောင်, ဂျေ Walter Hawk
စိုစွတ်သောဟော့အမေရိကန်နွေရာသီ: စခန်း၏ပထမဦးဆုံးနေ့, အမ်မလီ Kwong
တယ်လီအတွက်အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး - ပုံစံအရှည်: အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု & ADR
သူတော်စင်များနှင့်ကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်, ဗစ်တာ Ennis
Queens ဆူညံအော်ဟစ်, ဂယ်ရီ Megregian, MPSE
Liberty ၏သား, လူးဝစ် Bertini, MPSE
တက္ကဆက်ပြည်နယ်ထည 4, ယောဟနျသလိုင်
ငမောင်, မိုက်ကယ်ဂျေ Benavente, MPSE
တယ်လီအတွက်အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး - ပုံစံအရှည်: အသံအထူးပြုလုပ် & Foley
CSI: ရာဇဝတ်မှုရှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, Mace Matiosian, MPSE
Liberty ၏သား, Ruy Garcia က
တယ်လီအတွက်အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး - ပုံစံအရှည်: Music
သူတော်စင် & ကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်, del Spiva
Queens ဆူညံအော်ဟစ်, ဒါဝိဒ်သည် Klotz
Negroes ၏ကျမ်း, ဂျိုး Mancuso, MPSE
သားစဉ်မြေးဆက်, ပယင်း Funk
Drumline: တစ်ဦးကနယူးဘိ, Avital Korin
ဆယ်ကျော်သက်သဲသောင်ပြင် 2, ပယင်း Funk
စားဖိုမှူးရဲ့စားပွဲတင်, ဝီလျံ McGuigan
အသေအပျောက်အများဆုံး Catch, ဘော့ Bronow, MPSE
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သတို့သမီး, ရလာဒ်များပါသော Pookutty, MPSE
Undrafted, အဲရစ် Lalicata
30 များအတွက် 30: တစ်ဦးတည်းသောလူသား, အဲရစ် Lalicata
Keith Richards: အဆိုပါသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ဘရိုင်ယန် Chumney
အဆိုပါ Spymasters: အ Crosshairs အတွက်စီအိုင်အေ, ဂျေဆန် Schmidt က
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး: VIDEO Animation တိုက်ရိုက်
Lego မှ DC ကကာတွန်းစူပါသူရဲကောင်းများ: တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ် - Doom ၏ Legion ၏တိုက်ခိုက် !, Devon Bowman
မှော်မိုးစ, Paulette ဗစ်တာ Lifton, MPSE
အံ့ဩခြင်းစူပါသူရဲကောင်း Adventures ကို: Frost က Fight, မိုက်ကယ် Draghi, MPSE
စန်တာရဲ့အလုပ်သင်, Paulette ဗစ်တာ Lifton, MPSE
Tinker Bell ကိုနှင့် Neverbeast ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Todd Toon, MPSE
လှည့်ကွက်ဒါမှမဟုတ် Treaters, Paulette ဗစ်တာ Lifton, MPSE
7 မိနစ်, ခရီးစဉ် Brock, MPSE
အားလုံးတော, ခရီးစဉ် Brock, MPSE
နောက်ဆုံး Shift, မိုက်ကယ် Orlowski, MPSE
နားထောင်ခြင်း, ဒါဝိဒ်သည်ဘာဘာ, MPSE
, မြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ လုံ Bender, MPSE
စစ်ပွဲဝက်, ကားလို့စ် Sanches
ကျနော်တို့ဒီနေရာမှာဆဲဖြစ်ကြသည်, အဲရစ် Lalicata
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး: ကွန်ပြူတာ Episode Entertainment
အားလုံးမင်ျဂဘုရင်ကယူလနျြ, Devon Bowman
ဝမ်းမြောက်သောစိတ်စီးနင် - Prequel, ချားလ်စ် Deenan, MPSE
အဆိုပါမစ္စတာ Peabody ပြီးတော့ Sherman ပြရန်, Devon Bowman
တွမ် Clancy ၏ The ဌာနခွဲ: အေးဂျင့် Origins, ကီဗင် Senzaki
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး: ကွန်ပြူတာ Interactive Entertainment
Batman: Arkham Knight ဟာ, အင်ဒရူး Riley
Duty အဆင့်မြင့်စစ်ဆင်ရေး၏ခေါ်ရန်: Exo Zombies, အာဒံကိုဘှိုငျဒျ, MPSE
Star Wars - စစ်မြေပြင်, ချားလ်စ် Deenan, MPSE
StarCraft II ကို: အပယ်အမွေအနှစ် - "စည်းလုံးညီညွတ်ရေး" ရုပ်ရှင်ရုံ, ရှင်ပေါလု Menichini, MPSE
MacGillivray Freeman ကရဲ့ Humpback ဝေလငါး, အင်ဒရူး DeCristofaro, MPSE
စက်ရုပ် 3D, ဘရိုင်ယန်အဲလ်
မဟာချီကာဂိုစွန့်စားမှု, သောမတ်စ် Haigh, MPSE
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး: တစ်ဦးကရုပ်ရှင်ကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု & ADR
ရူးသွပ်မက်စ -Fury လမ်း, မာကု Mangini, MPSE နှင့် Scott Hecker, MPSE
အခန်းတစ်ခန်း, Niall Brady
Sicario, အလန် Murray
Star Wars: အဆိုပါအင်အားစုငါ့ကိုနှိုး, မဿဲ Wood က
ဖြောင့် Outta Compton, မာကု Stoeckinger နှင့် Greg Hedgepath, MPSE
အဆိုပါဂြိုဟ်, အိုလီဗာ Tarney, MPSE
အဆိုပါ Revenant, လုံ Bender, MPSE, Randy Thom နှင့်မာတင်ဟာနန်ဒက်ဇ်, MPSE
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး: တစ်ဦးကအင်္ဂါရပ်များရုပ်ရှင်ထဲတွင်အသံအထူးပြုလုပ် & Foley
ပုရွက်ဆိတ်-လူသား, Shannon Mills ကနဲ့ Daniel လော်ရီ
Jurassic ကမ္ဘာ့ဖလား, အယ်လ် Nelson နှင့် Gwendolyn Yates Whittle, MPSE
ရူးသွပ်မက်စ် - Fury လမ်း, မာကု Mangini, MPSE နှင့် Scott Hecker, MPSE
Southpaw, ကထပ်လောင်းဆောင်းရာသီ, MPSE
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး: တိရစ္ဆာန် feature ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အသံအထူးပြုလုပ်, Foley တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် & ADR
Anomalisa, အာရုန်သည် Glacock နဲ့ Christopher အက်စ် AUD, MPSE
ဟိုတယ် Transylvania 2, ဂျက်ဖရီ Rubay
အထဲကအတွင်းပိုင်း, Shannon Mills, Ren Klyce
minions, ဒန်းနစ် Leonard
Shaun အဆိုပါသိုး Movie,, အန်သိုနီ Bayman နှင့် Adrian Rhodes
ကောငျးဒိုင်နိုဆော, Shannon Mills က
အဆိုပါမြေပဲ Movie,, Gwendolyn Yates Whittle, MPSE နှင့် Randy Thom
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး: တစ်ဦးကအင်္ဂါရပ်များရုပ်ရှင်ထဲတွင်တေးဂီတ SCORE
ဂျူပီတာ Ascending, ရှင်ပေါလု Apelgren
Jurassic ကမ္ဘာ့ဖလား, ရှင်ပေါလု Apelgren
ရူးသွပ်မက်စ်: Fury လမ်း, ဘော့ Badami
မစ်ရှင်: Impossible - Rogue Nation, ယောဟနျသ Finklea
Star Wars: အဆိုပါအင်အားစုငါ့ကိုနှိုး, ရှင်ပေါလု Apelgren
အဆိုပါဂြိုဟ်, တိုနီ Lewis က
အဆိုပါ Revenant, မာတင်ဟာနန်ဒက်ဇ်, MPSE
မတ်ေတာသ & ကရုဏာ, က Nicholas Renbeck
အစေးပြီးပြည့်စုံသော 2, မန် Goodpaster
ဖြောင့် Outta Compton, ဂျေဆန် Ruder
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ရေး: နိုင်ငံခြား feature ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အသံအထူးပြုလုပ်, Foley တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် & ADR
Dias De Gracia, ဖရက်ဒရစ်သည် Le Louet နှင့် Enrique Greiner
Northmen - တစ်ဦးကဗိုက်ကင်း Saga, Markus Glunz နှင့်ပေတရု Staubli
ရှောလု၏သားတျော, Tamas Zanyi
Unfreedom, ရလာဒ်များပါသော Pookutty, MPSE နှင့် Amrit Pritam Dutta
တစ်ဦးကမြန်မြင်း, မာကု Stoeckinger နဲ့လုကာ Gibleon
မေီ, အန်ဒီ Shelley နှင့်စတီဖင် Griffiths က
ရန်သူများ၏အကောင်းဆုံး, Pete Horner
Kurt Cobain: Heck ၏ Montage, ကင်မရွန် Frankley
Extinction ပြိုင်ကား, တိ Nielsen နဲ့ Christopher ဘား
အဆိုပါဖျက်ဆီးလေယာဉ်အမှုထမ်း, ဘော့ Bronow, MPSE
အဘယ်သို့အလှမယ်ဆီမှဖို့ဖြစ်သွား Oleg Kulchytskyi
မီးဘေးတွင်ဆောင်းရာသီ: လတ်ြလပ်ခသည်ယူကရိန်းရဲ့ Fight
ကျောင်းသား Filmmaker မြည် edition အတွက် VERNA Field Awards
Chhaya, ရော့ Szeliga
Edmond, ရော့ Turner
Hum, ဂျက်ကီ Zhou
N0-တစ်ဦးက, Kai Paquin
Prism ကို, Gerry Vasquez
1953 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အ Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများအဆိုကိုပုံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်သောသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနဲ့ဂီတအယ်ဒီတာများ၏ non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့မစ်ရှင်ရောနှော, တစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအုပ်စုပညာရှင်များအနိုင်ရဆုအနေဖြင့်လူငယ်များနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရှင်များအသိပညာတစ်ခုစည်းစိမ်ကိုပေးတျောမူ၏ လမ်းညွှန်နှင့်အသံနဲ့ဂီတတည်းဖြတ်ရေးအတွက်အနုပညာအရည်အချင်းကိုနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးရပ်ရွာပညာပေး; ပညာရေးအတွက်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံအသံဆက်လက်တိုးဘို့ပေးပညာသင်ဆု; နှင့်ဤထူးခြားသောယာဉ်လေ့ကျင့်သူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝတွေကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးနေ။
RSP ပညာရေးက Aspiring ပန်းချီဆရာများကိုကူညီရာတွင်ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးသည် - ဇွန်လ 2, 2020
Tlalnewood မှ Estudios GGM သည်အသံအဆင့်အသစ်သုံးခုကိုဖွင့်လှစ်တော့မည် - ဇွန်လ 2, 2020
Howm Music Show သည် USMC နှင့် Wunderman Thompson တို့နှင့်အတူအဆင့်လိုက် - မေလ 26, 2020
ဆုပေးပွဲ အသံက တီဗီနည်းပညာ 2016-01-27
ယခင်: တီဗွီရှိုးများဟာ GIF ကို၏ခေတ် Enter
နောက်တစ်ခု: Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ (PWS) ကိုခန့်အပ်ဝီလျံ O'keefe ကုန်ထုတ်လုပ်မှု Manager ကို